China CNC Machining mveliso kunye nabenzi | Khokela
Ukujika kwe-CNC kuvelisa iindawo "ngokujika" izinto zentonga kunye nokondla isixhobo sokusika kwizinto eziguqukayo. Kwinto yokugcina izinto eziza kusikwa zijikeleza ngelixa umsiki esondliwa kwindawo yokusebenza ejikelezayo. I-cutter inokutyiswa kwiindidi ezahlukeneyo kwaye izixhobo ezininzi zinokusetyenziswa.
Njengamava eminyaka eli-15 Icandelo leCNC Machining umenzi wezinto, sinokuyila kunye nokwenza izinto ezintsonkothileyo iinxalenye isiphelo-sokusebenzisa izixhobo ezininzi kwiseli enye. Sikwasebenza ngenkqubo ejikelezayo ejikeleze i-axis yesi-4 ukuze iinxalenye ezininzi zamacandelo zenziwe ngomatshini ngeenqwelomoya ezininzi kuseto olunye.
Ukuchwetheza i-CNC yinkqubo yokuvelisa apho isoftware yekhompyuter elungiselelwe kwangaphambili inyanzelisa ukuhamba kwezixhobo zefektri noomatshini. Inkqubo inokusetyenziselwa ukulawula uluhlu loomatshini abantsonkothileyo, ukusuka kwii-grinders kunye ne-lathes ukuya kwi-mill kunye ne-routers. Ngomatshini we-CNC, imisebenzi yokusika emacaleni amathathu inokufezekiswa kwiseti enye yokukhuthaza.
Mfutshane "kulawulo lwamanani lwekhompyuter," inkqubo ye-CNC iqhuba ngokuchaseneyo- kwaye ngaloo ndlela ithathe indawo - ukusikelwa umda kolawulo lwencwadi, apho abaqhubi abaphilayo befuneka khona ukukhawulezisa nokukhokela imiyalelo yezixhobo zoomatshini ngokusebenzisa iilevers, amaqhosha kunye namavili. Kumntu obonayo, inkqubo ye-CNC inokufana neseti eqhelekileyo yeekhompyuter, kodwa iinkqubo zesoftware kunye neengcebiso eziqeshwe kwi-CNC machining ziyayahlula kuzo zonke ezinye iindlela zokubala.
Iinkonzo zeevenkile zeCNC
Inkqubo ye-CNC machining esemgangathweni inokubandakanya ezi ndlela zilandelayo:
Wokugaya -Ukuzisa isixhobo sokusika esijikelezayo xa sinxibelelana nomsebenzi omileyo
Ukujika -Ukujikeleza into yokusebenza ukuze unxibelelane nesixhobo sokusika; lathes ziqhelekile
Ukubhola -Ukuzisa isixhobo sokusika esijikelezayo ekunxibelelaneni nomsebenzi wokudala umngxunya
Kuyadika -Ukususa izinto ukuze kwenziwe isithuba sangaphakathi ngaphakathi kwindawo yokusebenza
Ukuqhekeza -Ukususa izinto ngothotho lwezinto ezingenzulwanga
Ukuseka - ukusika isikhewu esimxinwa kwindawo yokusebenza kusetyenziswa isarha blade
Izibonelelo zeenkonzo ze-CNC Machining
Izinto eziphathekayo: IAluminiyamIntsimbi, Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, Titanium, ubhedu, ubhedu, i-fiberglass, iplastiki, njl
Kugqityiwe: I-Anodized, Polished, Sand Blast, Powder camera, Electroplated, Nitriding, njl
Izixhobo: 3 axis cnc ngomshini, 4 axis cnc ngomshini, oomatshini abaqhelekileyo, ukubhola umatshini, umatshini wokukrola we-CNC, oomatshini bokukrola i-laser, njl
Ukunyamezelana ngokungqongqo: 0.005-0.01mm
Ixabiso loburhabaxa: ngaphantsi kweRa0.2
Iinkonzo ezongezelelweyo:CNC Machining, Ukuguqula i-CNC, Metal Ukunyathela, Iphepha lesinyithi, Kugqityiwe, Izixhobo,, njl
Egqithileyo Aluminium Amalungu
idilesi Inombolo 7 Yuansheng Rd, Yangjian Industrial Park, Wuxi, China
ibhokisi yeposi info@leadmachinery.net